ရန်ကုန်တွင် ချထားပေးနိုင်သည့် အဆညအိမ်ရာနှင့်အိမ်ခန်း ခွဲတမ်း ၃ဝဝ ကျော်သာရှိပြီး လျှောက်ထ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၆- အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာန ရန်ကုန်ပိုင်အိမ်/ အိမ်ခန်း၏ ချထားပေးနိုင်သည့် ခွဲတမ်းမှာ ၃ဝဝ ကျော်သာရှိပြီး လျှောက်ထားသူမှာ ၁၆ဝဝ ကျော် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၁၆ခုအတွက် တွဲဖက် ဌာနများအလိုက် ကထိကအဆင့် အိမ်ရာများ ခွဲဝေချထားပေးမည့် အိမ်ခန်းအရေအတွက်မှာ ၁၇၇ ခန်းရှိပြီး ယင်းအခန်းများအတွက် လျှောက်ထားသူမှာ ၈ဝ၇ ဦးရှိ ကြောင်း၊ လက်ထောက်ကထိက အဆင့်အတွက် အိမ်ခန်းအရေအ တွက် ၄၆ ခန်းခွဲတမ်း ရရှိမည်ဖြစ် သော်လည်း လျှောက်ထားသူ အရေအတွက်မှာ ၂၈၁ ဦးရှိ နေ ကြောင်း၊ ဌာနခွဲစာရေး၊ အထက် တန်းစာရေး၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ အခြားအဆင့်တို့အတွက် အိမ်/ အိမ်ခန်းခွဲတမ်းမှာ ၁ဝ၅ခန်းရှိပြီး လျှောက်ထားသူမှာ ၅၅၃ ဦး ရှိ နေကြောင်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီး ဌနစာရင်းများအရ သိရသည်။
”ဘတ်ဂျက်အခြေအနေနဲ့ နှစ် အလိုက်အိမ်ခန်းတွေကို ဆောက် လုပ်ပေးနေတာပဲ။ တစ်နှစ်ချင်းသွား ရတော့ရှိတဲ့အရေအတွက် အားလုံး ရအောင်မပေးနိုင်သေးဘူး။ ချထား ပေးတဲ့အခန်းတွေကို တကယ်နေ မယ့်လူတွေ၊ သတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီ တဲ့သူတွေကို ဦးစားပေးချထားပေး မှာပါ။ တက္ကသိုလ်အလိုက်စီမံခန့် ခွဲရေးအဖွဲ့တွေက ဆောင်ရွက် သွားပါလိမ့်မယ်”ဟု အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၂၆ ရက်က ပြောကြားသည်။
တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ် များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သော ဆရာ၊ ဆရာမများကို တာ ဝန်ထမ်း ဆောင်နေစဉ်ကာလ အတွင်း နေထိုင်နိုင်ရန် အမည် ပေါက်ဖြင့် အိမ်ခန်းများ ချထား ပေးနေသော်လည်း အချို့သော ဆရာ၊ ဆရာမများက ယင်းအခန်း ကို နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ တစ်ဆင့် ပြန်လည်ငှားရမ်းခြင်းများ၊ နေ ထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သော့ပိတ်ထားခြင်း များ ရှိနေသည့်အတွက် အခန်း ပိုင်ရှင်များကို အရေးယူဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆင့် မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
”တကယ်မနေရင်တော့ လိုအပ် တဲ့သူတွေကိုပြန်ခွဲပေးမှာ။ နေဖို့ပေး တဲ့အိမ်ကို တကယ်မနေဘဲ ပြန်ငှား စားထားတာတော့ လုံးဝလက်မခံ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်ခန်းတွေချ ထားပေးပြီးရင်လည်း စစ်ဆေးရေး ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီး တကယ်နေ၊ မနေကိုလိုက်ပြီးစစ်ပါမယ်”ဟု ယင်း က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဆရာ၊ ဆရာမများ နေထိုင် ရန်အတွက် ချထားပေးသည့်အိမ် များမှာ ၁၂ ထပ်အမြင့်ရှိသော အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများ ဖြစ်သည်။
လူမှုဖူလုံရေးစနစ်တွင် အာမခံလုပ်သားများ၏ မိသားစုဝင်များကိုပါ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက??
ရန်ကုန် ဘူတာကြီးတွင် ခရီးသည်များ ပစ္စည်းသယ်ဆောင်နိုင်မည့် လက်တွန်းလှည်းများ အခမဲ့ အသုံးပြု
ကျူးကျော်နေသူများအား စနစ်တကျ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရန် တိုက်တွန်းကြောင်း အဆို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ
လူအထင်ကြီး ခံချင်သဖြင့် စစ်ဗိုလ် အယောင်ဆောင် သူကို လှိုင်သာယာတွင် ဖမ်းမိ